Izinto 1.Choose: borosilicate High iglasi ityhubhu
Ukukhetha ubungakanani obahlukeneyo, ubukhulu kunye nobubanzi ngokusekwe kwiimveliso ekufuneka zivelisiwe. Kwaye kukho imibala ebonakalayo, e-amber, eluhlaza okwesibhakabhaka, emthubi, engwevu, epinki, emnyama, Umbala oqhelekileyo osetyenziswayo ubala.
2.based kubungakanani bemveliso ukwenza umzobo weglasi
Fudumeza ityhubhu yeglasi kwaye ususe ityhubhu kwelinye icala, emva koko udibanise isiphelo esisele ngombhobho werabha, Esinye isiphelo sombhobho sisemlonyeni wakho, Ngeli xesha, iglasi iyanyibilika, emva koko ifakwe kwisikhunta, uvuthuze umoya ungene kwiglasi, mayidumbe, emva koko ujikeleze indawo yeglasi ngaxeshanye, mayijikeleze ekubumbeni
Emva kweenkqubo ezininzi zokufudumeza, ubushushu bomlilo beglasi ngokwahlukileyo bohlukile kwiindawo ezahlukeneyo, nto leyo eya kuthi ikhokelele kuxinzelelo lwemveliso ngokwayo. Okokugqibela, imveliso ifuna ukufudunyezwa ngokulinganayo kube kanye.
Beka iimveliso kwisithando somlilo, Kukho ibhanti lokuhambisa elingena kwelinye icala liphume kwelinye. Ngeli xesha beka imveliso ukusuka kwelinye icala ukuya, kancinci ukusuka kubushushu obuphantsi ukuya kubushushu obuphezulu. Obona bushushu busondele kwindawo yokunyibilika yeglasi, emva koko buhambe bushushu kakhulu buye kwiqondo eliphantsi. Yonke le nkqubo ithatha malunga neyure enye. Imveliso ephuma ngolu hlobo yeyona ikhuselekileyo.